Shallow Foundation တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးကြရအောင် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > မြို့ ပြအင်ဂျင်နီယာပညာ > Geotechnical and Geological Engineering > Shallow Foundation တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးကြရအောင်
View Full Version : Shallow Foundation တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးကြရအောင်
အစ်မရေ... Tezargyi ရဲ့ Bearing Capacity ကို တွက်ဖို့ ချဉ်းကပ်တဲ့ Approach ကို ရှင်းပြပေးပါလား...
ကျွန်တော်တို့ Design ကိုစဉ်းစားရင် ရမယ့် ခံနိုင်မယ့် Soil ရဲ့ Strength ကိုပဲ.. သွား သွား input ပေးနေတာ
နောက်ပိုင်း data လေးတွေ စုံလာရင် ကိုယ် ထည့်လိုက်တဲ့ input တွေကို check လုပ်ရင် လုပ်တတ်အောင်လို့...
မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ဆီ ရောက်လာနိုင်တဲ့ Soil Data ကိုပဲ ယုံလိုက်ရတော့မယ်လေ.. Tezargyi ရော နောက် Mayerhof ရော.. သူတို့ရဲ့
ီDesign တွက်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်မယ်.. နောက် (ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အစ်မရယ်) ဘယ်လို တွက်မယ် ဆိုတာလေးတွေရောပေါ့.. :4:
သြော်... သူများကိုပဲ ခိုင်းနေတာတော့ မဟုတ်ဖူးနော်.. ကျွန်တော် ဖတ်လိုက်တိုင်း နားမလည်လာလို့...
ဒီနေ့ နားလည်လိုက်တာနဲ့ မနေ့က နားလည်ထားလိုက်တာတွေတောင် လွဲနေတော့လေ...... :?
(Soil Mechanic သမားများကို စော်ကားပြီး ပြောတာ မဟုတ်ဖူးနော်) :haha:
ှSoil ဆိုတာ ဘယ်လိုမှကို ယုံကြည်ထားလိုက်လို့ မရတာ လူတိုင်းခံစားလို့ ရတယ်မဟုတ်လားလေနော်..... :haha: :haha:
Tezargyi ရဲ့ Bearing Capacity ကို တွက်ဖို့ ချဉ်းကပ်တဲ့ Approach ကို ရှင်းပြပေးပါလား...
Terzaghi ကအောက်မှာပြောထားတဲအချက်တွေကို ယူဆထားပါတယ်။
1. Df &lt; B (Footing ရဲမြေအောက်ထဲမှာရှိတဲအနက်က Footing အောက်ခြေအကျယ် ထက်နဲရပါမယ်။)
2. General Shear Failure ဖြစ်တယ်လိုယူဆထားခြင်း။
3. Footing ရဲအောက်ခြေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ တြိဂံပုံ shear ဧရိယာမှာရှိတဲ ထောင့်ရဲတန်ဖိုးကို friction angle(phi) တန်ဖိုးအတိုင်း ယူဆခြင်း။
4. Footing အောက်ခြေရဲ အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ မြေကြီးရဲ shear strength ကို neglect လုပ်ထားခြင်း။
5. Footing အောက်ခြေရဲ အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ မြေကြီးကို surcharge ( surcharge = rDf ) အဖြစ် အစားထိုးထားခြင်း။
6. Footing အောက်ခြေကို ညီညာချောမွတ်ခြင်းမရှိသော မျက်နာပြင်ဟု ယူဆခြင်း။
Meyerhof ကတော့ Terzaghi ရဲ နံပါတ် ၄ အချက်ကို neglect မလုပ်ပဲထည်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် (အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ)။ ဒါကြောင် Meyerhof&#039;s equation မှာ depth factor ပိုလာရခြင်းဖြစ်တယ်။
Equation လေးတွေကိုတော့ Soil Mechanics and Foundation By Muni Budhu စာအုပ်ကနေ ကူးပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Terzaghi&#039;s Bearing Capacity Equation
Meyerhof&#039;s Bearing Capacity Equation
Geotechnical Engineer တယောက်အနေနဲ့foundation design data ပေးတဲ့ အခါ တွက်နည်း တခုထဲနဲ့ပေးလေ့ မရှိ ပါ။ Theoretical solution ၂ ခု၃ ခု လောက် နဲ့ တွက်ပြီး ရလာတဲ့ data ကိုတခါ empirical and semi-empirical methods (Alpan method, Meyerof method) တို့ နဲ့ check လုပ်ပြီးမှ Final Answer ကို ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး မြေအမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး တွက်နည်းအမျိုးမျိုးသုံးတတ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရ ရင် Sandy soil ဆို ရင် Alpan&#039;s method, Schultz Approximation, Modified Terzaghi&amp;Peck, Schmertmann, Bazaraa စသဖြင့် သုံးပြီး Clayey soil ဆိုရင် Janbu, Perloff စသဖြင့် လည်းသုံးကြပါတယ်။ အချိန်ပေးနိင်ရင် FEM နဲ့ ထပ်တွက်ပြီးလည်းပေးတတ်ပါတယ်။
Structural Engineer တယောက်အနေနဲ့ Geotech ကပေးလာတဲ့ Data ကို check လုပ်ကြည့် ချင်တယ်ဆို ရင် empirical solution ကို သုံးတာအချိန်ကုန်သက်သာနိုင်ပါတယ်။
ဟောဒီ link မှာ shallow foundation ကို အလွယ်တကူနဲ့ တွက်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။
ဒီ ဆွေးနွေးချက်ဟာတင်ထားတဲ့ topic နဲ့ လွဲနေတယ်ထင်ပါတယ်။ Shallow foundation နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ဆွေးနွေးနိုင်အောင် topic အသစ်အနေနဲ့ ပြောင်းလို့ ရရင် ပြောင်းပေးပါလား။
အဟီး.....ကိုဂျွန်မိုးအိမ် နဲ့ မချစ်ဆူး တဲ့ :2: :2: :2:
ဟိုနှစ်ယောက်တော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖက်ပြီး ငိုနေတော့မှာပဲ။ :&#039;( :&#039;(
မဂျွန်မိုးအိမ် နဲ့ မချစ်စုလေး ပါ။
ဘယ်လိုမျိုးဟာက Shallow Foundation လဲ
အဲ့ဒါကြောင့် ... တနေရာကတွေ့လို့မှတ်ထားဖူးတာလေးကို ပြန်ပြောပြမယ်နော် ။
-atype of foundation that is used when the earth directly beneathastructure has sufficient bearing capacity to sustain the loads from the structure
SHALL FOUNDATION အောက်မှာ တခါထပ်ခွဲရမယ်ဆိုရင်တော့ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ...
(1) Cantilever Wall -atype of foundation wall that consists ofastem andabase slab that is held in equilibrium by self-weight,
horizontal soil pressure, and the reaction of the base structure acting upward
(2) Combined Footing -afooting that is used under two or more vertical elements to prevent overturning from eccentric loading
(3) Mat/Raft Foundation -alarge slab foundation that is used instead of multiple spread footings
(4) Spread Footing - the most widely used type of shallow foundation that is designed to receive the concentrated loads directly on the centroid
to prevent unequal pressure distribution and overturning of the footing
(5) Strip Footing - an extended footing used under foundation walls; strip footings are used in basements, crawlspaces, and for slabs-on grade.
(6) Wall Footing - elongated spread footings that transfer loads from load bearing walls. Wall footings are used in substructures such as slabs-on-grade,
တခြား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေလဲ အမျိုးမျိုးရှိကြမှာပါ။ အောက်မှာလဲသွားကြည့်လို့ရပါတယ် ။
၀ီကီမှာ သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ .....
ကို AndrewSway အကြံပြုတဲ့အတိုင်း ခေါင်းစဉ်ကို ပြန်လည်ခွဲလိုက်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေ အားရပါးရ ဆွေးနွေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ
Shallow နဲ့Deep ကို topic သတ်သတ်ခွဲ ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၂ နှစ်လောက် shallow မလုပ်ဘဲ Deep foundation design ဘဲ လုပ်ခဲ့ ရသလို ၃ နှစ်လောက် deep မလုပ်ဘဲ shallow design ဘဲ လုပ်ခဲ့ ရတဲ့ အချိန်တွေရှိခဲ့ ဘူးလို့ ပါ။ သတ်သတ်စီဆိုတော့မရောမထွေးဘဲဆွေးနွေးနိုင်မယ်ထင်လို့ ပါ။
အရင်က MIT မှ shallow foundation နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး Open Lecture တင်ထားတာရှိပါတယ်။ အခုမရှိတော့ ပါ။ Soil Mechanics ဘဲ ရှိပါတော့တယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်က Link မှာ သွားကြည့် နိုင်ပါ တယ်။
အရင် က Texas A&amp;M မှ shallow foundation video lecture series များ တင်ထားသော်လည်း အခုရှာမရတော့ ပါ။ India က နံမည်ကြီး IIT က တင်ထားတဲ့video lecture များကို တော့ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက် က Link မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Shallow Foundation ရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက် လေး အချို့ပါ။
ADVANTAGES OF USING SHALLOW FOUNDATION
1- Cost (affordable)
2- Construction Procedure (simple)
3- Materials (mostly concrete)
4- Labor (does not need expertise)
DISADVANTAGES OF USING SHALLOW FOUNDATION
2- Limit Capacity * Soil * Structure
3- Irregular ground surface (slope, retaining wall)
4- Foundation subjected to pullout, torsion, moment.
ကိုယ်တွက်ထားတဲ့ မြေသားရဲ့ Bearing Capacity ရဲ့ result ကိုစစ်ကြည့်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ,
သက်ရောက်မဲ့ pressure ကိုသိလို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အကြမ်းဖြင်း အဆင်ပြေမပြေ စစ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ,
Foudation ရဲ့ size ကို အကြမ်းဖြင်း သိချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
non-cohesive(sandy) နဲ့ cohesive(clayey) တို့အတွက် မြေသားရဲ့ Bearing Capacity ရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို အောက်ပါဇယားကနေ လွယ်တကူ အကြမ်းဖြင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်.
Page ( 8 )
Singapore, LTA (Land Transport Authority) က Foundation (Shallow &amp; Deep) အတွက် ခွင့်ပြုထားတဲ့ Settlement နဲ့ Horizontal deflection တန်ဖိုးလေးတွေပါ။ အလွယ်တကူ Reference လုပ်နိုင်အောင်ပါ။
မချစ်စု ရဲ့ allowable total and differential settlement value တွေကပိုတင်းကြပ်နေတယ်ထင်တယ်ဗျ။ လောလောဆယ် reference စာအုပ်ကအနားမှာမရှိတော့ စာအုပ်လှန်ကြည့်လို့မရလို့။ကျွန်တော်ထင်တာမမှားဘူးဆိုရင် :4: differential settlement 1:250 ဒါမှမဟုတ်ရင် 1:500 ဆိုတာ Normal structure တွေအတွက်အလွန်ဆုံးထင်တာဘဲ။ Total ကအများဆုံး 50 mm ထင်တာဘဲ။ (ကျွန်တော်က EC7 ကိုအခြေခံပြောနေတာပါ။) HDB residential housing project တွေအတွက်တော့ 1:500 နဲ့ 25mm လို့ကန့်သတ်ထားတယ်။ LTA structure တွေက deflection နဲ့ angular rotation (beta) ကိုပိုပြီး sensitive ဖြစ်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် column loading တွေဘဲအရမ်းကွာခြားချက်များလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် dynamic loading ကြောင့်လား၊ ပိုအရေးကြီးတဲ့ public structure တွေဖြစ်တာကြောင့်လား သိရင်ပြောပေးပါအုံး။
နောက်တခုစဉ်းစားမိတာက .... ဒီ differential settlement ဆိုိတာကြီးကို ကျွန်တော် site supervisor တယောက်အနေနဲ့floor တခုပြီးတိုိင်း surveyor ဆီက report ကိုစောင့်ပြီး monitor လုပ်ပါလို့ QP ကခိုင်းထားလို့သာ စောင့်ကြည့်နေရတာ ....project ၂ ခုလောက်သာပြီးသွားတယ်...report ကအမြဲ OK နေတော့ဘာမှပြဿနာမပေါ်ခဲ့ဘူး။ တကယ်လို့ အဲဒီ ...differential settlement တွေက allowable limit တွေထက်ကျော်ကုန်ပြီဆိုပါတော့ ...အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ သိတဲသူတွေပြောပြပေးပါအုံး။ (ဟုတ်ပါတယ်။အဲဒီအချိ်န်ဆိုရင်လဲ ကျွန်တော့်QP ကဘဲ solution ကိုစဉ်းစားမှာပါ။ကျွန်တော်က သူခိုင်းတာလုပ်ပေးရုံပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို option တွေရှိလဲဆိုတာသိချင်လို့။) ကျွန်တော် (လူပြိန်းတယောက်အနေနဲ့ ဥာဏ်မှီသလောက်လုပ်ဆိုရင်) settlement နဲနေတဲ့ column တွေကို ညီသွားအောင် loading တွေနဲ့ထပ်ဖိပစ်မှာဘဲ။ :4:
construction မစခင်မှာ computer software နဲ့ analysis လုပ်ကြည့်တဲ့အခါdifferential settlement ဟာ ခွင့်ပြုထားတာထက် ကျော်နေမယ်ဆိုရင် ဖောင်ဒေးရှင်း ရဲ့အောက်မှာ compensating grouting ထည့်သွင်းလောင်းထားခြင်းဖြင့်လဲ construction ပြုလုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း settlement များခွင့်ပြုထားတာထက်မကျော်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါတယ်။ (အခြားနည်းများ ကိုလဲ သိတဲ့သူတွေရေးကြပါဦးနော်)
အိမ်က ဒီလိုစောင်းသွားတယ်ဆိုရင် စောင်းသွားတဲ့ဘက်က ဖောင်ဒေးရှင်း ရဲ့အောက်ကို grouting (Jet Grouting or Underpinning) လုပ်ပေးပြီး ပြန်မြင့်ယူနိုင်ပါတယ်။
ီDifferential Settlement အတွက်အကောင်းဆုံး (ဈေးအသက်သာဆုံး) ကတော့ compaction လို့ ဘဲထင်ပါတယ်။ Sandy top soil ရှိတဲ့ နေရာမျိုးဆိုရင်ပေါ့ ။ Residential building အတွက် Geotech report ရေးတဲ့ အခါ site preparation မှာ top soil ကို2feet လောက်အထိ stripped တူးထုတ် ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးရင် stripped grade မှာ proof rolling ခိုင်းပါတယ်။ Subgrade proof rolling compaction ကို at least 95% of the modified proctor maximum dry density (ASTM D-1157) ကို minimum2feet below the stripped grade အထိ ရအောင်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးမှ fill material ကို ဖြည့်ခိုင်းပါတယ်။ Fill ကို လည်း 95% dry density ရသည်အထိ တလွှာချင်းroll လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီလို မှမလုပ်ချင်ရင် တော့wood pile ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ ဘေးအိမ်တွေရှိလို့vibration ပြသနာရှောင်ချင်ရင်တော့ stone column, aggregate pile, vibro-float, helical pile စသဖြင့် လည်း လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ Commercial building တွေကျောင်းတွေဆိုရင်တော့Rapid compaction, Dynamic compaction စတဲ့ နည်းတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ ကတော့ ၁၀ ပေအနက်အထိ effect ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆောက်ပြိးသားအိမ် တွေ compaction သေ သေချာချာမလုပ်လို့ Differential Settlement ဖြစ်ရင်တော့flow-able fill, mud jacking, poly urethane injection (chemical grouting) စသဖြင့် နည်းများနဲ့ controll လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သည့်ထက်ဈေး ကြီးတာသုံးချင်ရင်တော့ မချစ်စူးလေးပြောတဲ့ low slump Jet Grouting or Under-Pinning တို့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ under-pinning ကို တော့ ဈေးကြီးသည့် အတွက် structrual damage ဖြစ်မှဘဲ recommend လုပ်ပါတယ်။
Geotech engineerရဲ့ recommendation အတိုင်းဆောက်လို့ ကတော့allowable ထက်ကျော်စရာရှိမယ်မထင်ပါ။
MEF နဲ့ သိတာတွေကို share လုပ်ကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Terzaghi Bearing Capacity Theory နှင့် shallow foundation ကို တွက်ကြည့်ရာမှာ Angle of Shearing Resistance ဆို တာကိုတွေ့ပါတယ်..ဘယ်လောက်ယူပြီးတွက်ရမှာပါလဲ.....ကျန်တဲ့ data တွေ အားလုံးတော့ ရှိပါတယ်..
12-20-2010, 02:57 PM
Terzaghi Bearing Capacity Theory နဲ့ တွက်ရာမှာAngle of Shearing Resistance ဆိုတာ ဘယ်လောက် ယူရမှာပါလဲ..တခြား Data တွေကတော့ ရှိပါတယ်...
angle of shearing resistance (internal angle of friction, angle of frictional resistance; φ,phi) ကတော့ မြေအမျိုးအစား၊ relative density, moisture content, etc.. စ သည့် အချက်များပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဘိုးအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြား Data ဆိုတာများလည်းပြောပြနိုင်ရင်ပြောပြပေးပါ။ လက်တွေ့ဒီဇိုင်းလုပ်ရမှာလား အတန်းထဲက အိမ်စာအတွက် တွက် ရမှာလားလည်း ပြောပေးပါ။
အလုပ်ထဲမှာ ဒီဇိုင်းလုပ်ရမှာဆိုရင် တော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ phi ကိုဘယ်လို ရှာတယ်ဆိုတာ မချစ်ဆူးလေး ရဲ့Geotechnical Design Paramters (Soil & Rock များ၏် r, cu, c', phi, E စသည်.... အောက်မှာ အကြမ်းဆွေးနွေးခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာ ယေဘူယျအားဖြင့် ယူဆနိုင်မဲ့phi value များကို အောက်ကဇယားမှလည်းရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Foundation Analysis and Design (3rd Edition) pp-135 by Josephe. Bowles